Abukaate Sakariye: Madaxweynaha Wax Ka Bedel Dastuur Xaq Uma Lahan – Great Banaadir
Abukaate Sakariye: Madaxweynaha Wax Ka Bedel Dastuur Xaq Uma Lahan
Abukaate Sakariye Sheekh Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee qoray dastuurka qabyo qoraalka ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee hareeray xeerka uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wax ka bedelka dastuurka ugu dib dhigay Baarlamaanka 11aad ee soo socda.
Kala qaybsanaan xagga Xildhibaanada Golaha Shacabka ah ayaa ka dhalatay tallaabada uu Madaxweynuhu wax ka bedelka dastuurka ugu dib dhigay Baarlamaanka cusub ee lagu wado in dhawaan la soo dhiso.
Abukaate Sakariye Sheekh Yuusuf oo ka hadlay sharci ahaan cidda saxan ayaa yiri “Qodobka 60aad ee dastuurka wuxuu aad u cadeynayaa Baarlamaanka iyo muddo xileedkiisa. Baarlamaanka 10aad ayaana laga rabay inuu dhameystiro sharciga dastuurka.”
Waxa kaloo uu yiri “Qodobka 63aad, farqadiisa A wax ka bedel dastuur iyo dib u eegis dastuur oo lala akhriyay qodobka 132aad waxaa wax ka bedelka dastuurka iska leh Baarlamaanka, marka waa hawshiisii.”
Abukaataha oo sharxayay awoodda uu dastuurka siinayo Madaxweynaha ayaa yiri “Haddaad fiirisid qodobka 90aad ee awoodda Madaxweynaha, farqadiisa F wuxuu si cad u tilmaamayaa Madaxweynuhu awooddiisa waxaa ka mid ah, waa saxiixaha sharciga uu soo gudbiyo Baarlamaanka, markasta Baarlamaan waxaan ula jeedaa Labada Aqal. Qodobada 90aad, 79aad, 80aad iyo farqadahooda marka lagu istaago waxay tilmaamayaan in Madaxweynuhu uu ka booday sharciga.”
Abukaate Sakariye Sheekh Yuusuf oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray “Madaxweynaha wax ka bedel dastuur xaq uma lahan.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabadan qaaday, xilli muddo xileedka Baarlamaanka haatan jira uu waqtigiisu ku egyahay 27-ka bishan Desember. – Universal TV Somali